Lọ Akwụkwọ Nkà Mmụta Ọtọ 10 Na Canada Na Sikolas
2022 International na Scholarship nke Obodo | Mụọ Ohere Ohere | Onyinye ego na ego |
Free Online Ọmụmụ
Ọmụmụ ihe na Canada
Akwụkwọ Ọchịchị Australia
Ọmụmụ Akwụkwọ Canada
Ọmụmụ ihe Europe
Akwụkwọ Ọmụmụ Ndị India
Ị nọ ebe a:
March 1, 2022 Eze Thadeus
Ndị a bụ ụlọ akwụkwọ nkà mmụta 10 kacha elu na Canada na-enye onyinye mmụta na ụdị ndị ọzọ enyere ụmụ akwụkwọ aka ma ụmụ akwụkwọ Canada na mba ụwa.
You nwere oke agụụ maka nka ma chọọ ịzụlite nka gị ma ọ bụ ọbụlagodi ịchụso ọrụ na ngalaba ọrụ nka? Kwesịrị ịga ụlọ akwụkwọ nka nke ga - enyere gị aka ịzụlite nka ndị a ma mee gị ọkachamara.
Edemede a nwere ozi zuru oke banyere ụlọ akwụkwọ nka na Canada yana agụmakwụkwọ na enyemaka enyemaka ndị ọzọ maka ụmụ amaala na ụmụ akwụkwọ mba ụwa ka a zụọ ha na ngalaba nka.
Nka bu ihe ochie dika nwoke n’onwe ya ma nwee otutu mgbanwe kemgbe ahu ma ka na agbanwe site n’inyocha ya nke oma na inyocha miri emi. Nchọpụta nke teknụzụ dijitalụ mekwara ka uto nke nka wee mepee ụdị ọrụ ọhụụ dịka foto, eserese, imepụta egwuregwu, nka eziokwu, wdg.
Tupu mgbe ahụ, edere m otu isiokwu na-ekpughe ihe ụlọ akwụkwọ nkà kacha mma n'ụwa maka ụmụ akwụkwọ mba na anụ ụlọ ị nwere ike ile anya.
Ọ bụrụ n ’ọ bụghị naanị ụlọ akwụkwọ nka aka ka ị na-aga ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ na mba ofesi na agụmakwụkwọ, ị nwere ike ile anya na ndepụta anyị ụlọ akwụkwọ mba ụwa nwere agụmakwụkwọ zuru oke.
Canada bụ otu n'ime ebe mmụta kachasị mma n'ụwa, ọ nwere ọnụ ọgụgụ mpụ dị ala, ihu igwe dị mma, na gburugburu ebe obibi dị mma yana ogo nkuzi bụ ọkwa kachasị elu, mara ụwa niile. Schoolslọ akwụkwọ nka dị na Canada nwere ezigbo ndị nkuzi na akụrụngwa iji mee ka ị bụrụ nwata akwụkwọ nka kacha mma.
Achịkọtara m ụlọ akwụkwọ kachasị mma na Canada nke na-enye agụmakwụkwọ na ụdị enyemaka ego ndị ọzọ iji nyere ụmụ akwụkwọ aka ị nweta ego ma gbaa ha ume ka ha bụrụ ụmụ akwụkwọ ka mma.
Lọ Akwụkwọ Nkà Mmụta Ọzụzụ Na Canada
Mahadum Alberta nke Arts
Mahadum Concordia, Ngalaba Fine Arts
Mahadum Emily Carr nke Art & Design
George Brown College, forlọ Ọrụ Maka Arts & Kere
Valọ akwụkwọ Art & Design nke Nova Scotia
Mahadum Ontario & Art nke Ontario
Uklọ Akwụkwọ Visual Arts nke Yukon
New Brunswick College nke Craft & Design
Lọ Akwụkwọ Art nke Ottawa
Sheridan College, Ngalaba nke Animation, Arts na Kere
Ya mere, mgbe m nyochachara ihe niile banyere ụlọ akwụkwọ nkà na Canada, enwere m ike ịchịkọta ụlọ ọrụ nka 10 na agụmakwụkwọ dị na Canada.
Mahadum Concordia, Ngalaba Visual Arts
Sheridan College, Ngalaba nke Animation, Arts na Kere.
N'ịbụ onye guzosiri ike na 1926, a maara Mahadum Alberta nke Arts dịka ụlọ akwụkwọ nka kachasị na Canada, nwee ike ịzụlite ihe okike na ịchụpụ ihe ọhụrụ, AUArts emeela ka ọtụtụ puku ụmụ akwụkwọ nwee ike ịchụso ma nweta ebumnuche ha.
Iji nyere ụmụ akwụkwọ aka ịga n'ihu, ụlọ ọrụ ahụ na-enye enyemaka ego kwa afọ dịka agụmakwụkwọ, agụmakwụkwọ, ihe nrite, na onyinye iji nyere aka kwado ọmụmụ ihe ha ma mee ka nrọ ha mezuo.
AUArts na-enye ụdị onyinye dị iche iche kwa afọ nke ụmụ akwụkwọ mba ụwa na ndị Canada na-etinye aka na ngalaba nka ọ bụla ha họọrọ, ọ dịkwa mkpa ka ị mara ụdị onyinye ndị a ka ị wee mara nke ị ga-etinye. Awardsgwọ a bụ;
Onyinye Mmụta Ọzụzụ bu udi ihe onyinye diri ndi AUArts freshers ma obu umu akwukwo nke izizi mgbe ha nyefere oru ha ma nye ha ego ha.
Onyinye Ọzụzụ Akpaaka bu udi akwukwo onyinye nke n’achighi ka nwata akwukwo tinye ya kama ahoputara ya nke oma site na omumu ihe omumu ha n’aho akwukwo gara aga ma obu ikike nke oru nwata akwukwo.
Onyinye Nkuzi Asọmpi bu udi onyinye nke choro umu akwukwo ka ha mejuputa ma tinye akwukwo ha ma enwere uzo puru iche ndi choro choro inweta tupu ndi komputa ma obu ndi komiti choputara ha.
Ụgwọ bu onyinye enyere umu akwukwo ndi chere nsogbu ego aka.
nwa anụmanụ bụ onyinye enyere ụmụ akwụkwọ nke nwere ike ịbụ n'ụdị akwụkwọ, onyinye, medal, akara, ndenye aha na asambodo onyinye.
Gaa leta ụlọ akwụkwọ ebe a
Ngalaba a nwere ihe karịrị ụmụ akwụkwọ 3,800 debanyere aha na mmemme 60 na postgraduate na gburugburu ebe obibi nke gosipụtara oghere na ụdị dịgasị iche iche nke ọdịbendị nke oge a, nke ndị nchọpụta a ma ama, ndị na-ese ihe, na ndị ọkà mmụta na-enye ọzụzụ dị mma ma bụrụ ihe nnọchianya nke mmụọ nsọ na agbamume. nye umu akwukwo.
Mahadum Concordia, ngalaba nke ezigbo nka bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ nka kacha elu na Canada. O nwere ngalaba itoolu na ebe a na-eme nchọpụta nyocha anọ maka ịmekọrịta teknụzụ ọhụrụ, usoro mgbasa ozi ọdịnala, na omume nka mara mma.
Mahadum ahụ na-enyekwa ụmụ akwụkwọ ohere agụmakwụkwọ na ngalaba nke itoolu ndị a.
Institutionlọ ọrụ ahụ nwere onyinye mmụta abụọ maka ngalaba nke ezigbo nka ma ha bụ;
Ihe nkuzi nke ncheta nke Heather Walker E guzobere na 1995 site na ngalaba nke ezi nka site na onyinye nke ndị ọrụ ibe na ndị enyi ma na-enye ụmụ akwụkwọ zuru oke ma ọ bụ oge nwa oge kwa afọ na otu n'ime mmemme enyere na Cinema ma ọ bụ Photography. A na-ahọpụta ndị mmeri nke agụmakwụkwọ a dabere na nka ha na nka ha na agụmakwụkwọ ha na itinye aka na ọrụ enyemaka mmadụ.
The Heather na Erin Onyinye Enyemaka guzosie ike na 1995 site na ngalaba nke ezi nka site na onyinye nke ndị ọrụ ibe na ndị enyi na-enye kwa afọ nwa akwụkwọ zuru oke ma ọ bụ nke ọkara oge debanyere Bachelor nke ezi nka. A na-ahọrọ ndị na-achọ ọrụ dabere na ọrụ enyemaka ha, agụmakwụkwọ na nka, yana ọrụ obodo.
IHE: The scholarships bụ maka naanị ụmụ akwụkwọ
N'ịbụ onye guzosiri ike na 1925, Emily Carr University of Art and Design (ECUAD) bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ kacha mma na Canada nwere gburugburu mmụta dị mma nke etinyebere maka ịdị mma na ihe ọhụụ na nka anya, nka mgbasa ozi, na imewe. ECUAD na-enye ụmụ akwụkwọ nkuzi dị mma, ma nke bara uru ma na tiori, n'ụdị ọ bụla nke nka ha bu n'uche ịmụ ụmụ akwụkwọ ahụ bụ ndị ọkachamara n'ọzụzụ ọmụmụ ha.
ECUAD bụ ụlọ akwụkwọ ama ama ama ama ama ama ama ama ga - enyere gị aka ka ị bụrụ nwa akwụkwọ mejupụta ebumnuche gị, na afọ ole na ole mahadum emeela ka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ mejupụta nrọ ha site na akwụkwọ agụmakwụkwọ / enyemaka ego kwa afọ nke ụmụ akwụkwọ niile nwere.
ECUAD na-enye ezigbo ego enyemaka kwa afọ iji nyere ụmụ akwụkwọ aka ma ha bụ;
Ego maka ụmụ akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ bụ ụdị enyemaka ego maka ụmụ akwụkwọ ọhụrụ, ụmụ akwụkwọ ugbu a, na ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ nwere ike tozuo maka nkwado ego.
Ntinye akwukwo Ntinye akwukwo nwere ihe onyinye akwukwo asaa ndi ozo megheere umu akwukwo ulo na ndi mba ozo ma nyeghachi ha umu akwukwo ohuru nwere mmuta ihe omumu na ikike ha. Ndị ọkà mmụta a ga-ekpuchi akụkụ dị mkpa nke akwụkwọ akwụkwọ na afọ mbụ ha.
Nkuzi akwukwo a na-enye ụmụ akwụkwọ n'ụdị mbelata akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ na ọdịda na-esote na ọkara nke afọ ma nwee ihe karịrị iri na abụọ nyere onyinye agụmakwụkwọ nke dị maka ụmụ akwụkwọ afọ nke mbụ, nke abụọ na nke atọ debanyere aha 12 ma ọ bụ karịa na ECUAD. Naanị ụmụ akwụkwọ ndị jigidere CGPA opekata mpe nke 3.33 n'oge ntinye oge (Machị) tozuru oke itinye akwụkwọ.
Ọkà Mmụta Ọpụpụ nwere ike ịbụ ụdị enyemaka ego ọ bụla sitere na mpụga ECUAD nke ụmụ akwụkwọ nwere ike ịnweta ma kpebie iji ya na ECUAD.
Studentsmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na-akwụ ụgwọ a na-enye nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ nke ECUAD ghọtara maka ịdị mma na ikike nka ma enwere ọtụtụ agụmakwụkwọ ndị a maka ngwa.
Ormụ akwụkwọ ụmụ amaala Aboriginal bụ ụdị enyemaka ego enyere naanị ụmụ akwụkwọ aborigine dịka akụkụ nke ntinye akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ iji hụ na ha nwere ọganiihu agụmakwụkwọ.
Ejiri ụlọ ọrụ nyocha ihe osise kachasị elu ma dị n'etiti obodo dị iche iche ma sie ike, George Brown College, Center for Arts and Design bụ ebe ịkwesịrị ịmụ iji nweta nka bara uru n'ụdị nka ọ bụla ị họọrọ. ma kwadebe gị maka njem ọrụ.
Schoollọ akwụkwọ ahụ bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ nka na Canada na-enye ọtụtụ ụmụ akwụkwọ mba na ụlọ ụlọ ọtụtụ agụmakwụkwọ kwa afọ ndị chọrọ ịbụ akụkụ nke ụlọ ọrụ nka ama ama, agụmakwụkwọ ndị a bụ;
Ulo akwukwo / akwukwo akwukwo. A na-enye ụmụ akwụkwọ ruru eru iri atọ na otu ohere ịga akwụkwọ na diplọma oge niile. Iji ruo eru maka akwụkwọ agụmakwụkwọ, ndị na-enyocha akwụkwọ ga-esonyela na mmemme enyerela ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ aka, ngalaba agụmakwụkwọ ha, ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ n'ozuzu ha.
Ọzọkwa, onye a na-amụrụ ihe ga-agwụcharịrị ma ọ dịkarịa ala abụọ semesters nke ọmụmụ na obere CGPA nke 3.5 tupu usoro ọmụmụ nke ugbu a.
Asambodo Asambodo bụ onyinye dịịrị ụmụ akwụkwọ tozuru etozu na-abịa akwụkwọ na mmemme asambodo oge niile. Onye anamachọ ihe aghaghi inwe CGPA nke 3.5 ma tinye aka na ulo akwukwo.
Nkà Mmụta EAP nwere akwukwo mmụta iri na asatọ maka umu akwukwo ESL na-alaghachi. Onye anamachọ agha aghaghi imecha otu ọkwa nke Bekee maka Mmemme Ebumnuche Ọmụmụ yana ọkwa A nkezi wee sonye na mmemme ndị nyere ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ aka, ngalaba agụmakwụkwọ ha, ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ n'ozuzu.
Nkuzi mmuta nke si mba ofesi ha bụ agụmakwụkwọ sitere na mpụga George Brown College, Center for Arts & Design na ha dị atọ; Kimokran Scholarship, Nyere aka na Scholarship, na nkuzi nkuzi nke Woori. Iji ruo eru, ndị na-enyerịrị akwụkwọ ga-enwerịrị CGPA nke 3.3 ma na-etinye aka na mpaghara ụlọ akwụkwọ.
Site na ogologo akụkọ ihe mere eme nke imepụta ihe na-aga nke ọma ma dị na obodo dị n'ụsọ oké osimiri nke nwere ụdị nkà dị iche iche, Nova Scotia College of Art & Design (NSCAD) jupụtara na ndị omenkà mara mba ụwa, ndị nrụpụta, ndị nyocha, na ndị gụrụ akwụkwọ na-akụziri ụmụ akwụkwọ nkà ndị dị oke mkpa dị mkpa iji nwee ọganihu na gburugburu ụlọ akwụkwọ nka na karịrị ụlọ akwụkwọ.
NSCAD na-enye umu akwukwo akwukwo ego nke nwere ego ha bu n’obi igu akwukwo n’ulo akwukwo a ma ha n’enye ndi akwukwo a kwa afo.
Iji kere òkè na Ọzụzụ Mmụta Mbata, ndị ntinye akwụkwọ kwesịrị itinye akwụkwọ site na mbido ụbọchị mbụ nke Machị 1 ka a tụlere ya na akpaghị aka. NSCAD na-enyekwa ihe karịrị akwụkwọ agụmakwụkwọ dị n’ime 90 na nkwado kwa afọ agụmakwụkwọ iji mee nke ọma ndị na-achọ ịga nke ọma n’ụzọ ọ bụla ha họọrọ.
N'ịbụ onye guzosiri ike na 1876, a na-ahụ Ontario College of Art & Design University dị ka ụlọ akwụkwọ nka kacha mma na Ontario Canada, makwaara dị ka ụlọ akwụkwọ nka ochie kacha ochie na Canada, ụlọ ọrụ kachasị ukwuu na ụlọ ọrụ maka nka na imewe.
The University of Art & Design University nke Ontario (OCAD U) raara onwe ya nye nka na nka ihe omumu, omume, na nyocha n'ofe otutu usoro. A na-eji ụmụ akwụkwọ mara mma na teknụzụ na-ahụ maka ụmụ akwụkwọ yana sayensị, usoro okwu, oke egwu, na akụkọ ihe mere eme na usoro.
A na-emezi OCAD U nke ọma site na iji ihe eji arụ ọfụma maka ụmụ akwụkwọ iji nyochakwuo ihe okike ha, mepụta nyocha na itinye aka ndị ọzọ. Institutionlọ ọrụ a bụ ebe kachasị mma iji zụlite ikike nka gị ma mezuo ebumnuche gị.
Iji gbaa ụmụ akwụkwọ ume ka ha bụrụ akụkụ nke OCAD U, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ụmụ akwụkwọ nwere ike ịnwe nsogbu ego na enyemaka ego kwa afọ.
Enyemaka ego nke OCAD U nyere bụ iji mata mmata nke ụmụ akwụkwọ yana a na-enye ya kwa afọ maka usoro mmemme ọ bụla na ọkwa afọ dabere na akara ule ma ọ bụ site na asọmpi juried, enyemaka ndị a bụ;
scholarships A na-enye ha dị ka ụgwọ akwụkwọ tupu mmalite nke afọ agụmakwụkwọ na-esote, ụmụ akwụkwọ adịghị mkpa itinye akwụkwọ mana a ga-ahọrọ ha dabere na mmuta agụmakwụkwọ ha mara mma na usoro ọmụmụ ha ọ bụla yana agụmakwụkwọ nwere ike ịbụ otu oge ma ọ bụ imeghari dabere na ụmụ akwụkwọ ọrụ .
A na-enye ndị nkuzi na ọkwa 1st, 2nd, na nke 3rd n'afọ na ikike nke Art, Design, Liberal Arts & Sciences, na School of Interdisciplinary Studies.
Awards makwaara mmuta ihe omumu nke umu akwukwo na ikike nka ma enyere ha aka na nnochi nke mbu nke ano site na mpi ndi agha na ngwucha nke akwukwo obula ma ha bu ugwo ego.
nwa anụmanụ A na-enye ha n'ime usoro agụmakwụkwọ na nke onyinye na ọ nwere ike ịbụ n'ụdị ego ma ọ bụ nke na-abụghị nke ego.
N'ịbụ onye guzosiri ike na 2007 ma mara dị ka ụlọ akwụkwọ mara mma nke kacha mma na Canada, Yukon School of Visual Arts (SOVA) nwere ọhụụ iji nye mmụta mmụta mmụta dị omimi na obodo nwere ọdịbendị. Uklọ Akwụkwọ Visual Arts nke Yukon bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ nka ọhụụ na Canada.
Agbanyeghị na ụlọ ọrụ ọhụụ ụlọ akwụkwọ ahụ emezughị ọhụụ ya site n'aka ụmụ akwụkwọ ya. Aremụ akwụkwọ na-eji nkà na usoro iwu eji arụ ọrụ iji wepụta ikike ha nwere ma kwadebe ha maka njem dị n'ihu.
YSOVA na-enye enyemaka mmụta kwa afọ nye ụmụ akwụkwọ ndị chọrọ ịbụ akụkụ nke ụlọ ọrụ ahụ mana ha na-enwe nsogbu nsogbu ego. Onye anamachọ ihe gha aghaghi ibu nwa akwukwo oge nile edeputara na Visual Arts Programme ma debe onodu B na oge mgbada.
Ihe onyinye onyinye WhiteHorse Motors: WhiteHorse Motors bụ ndị ọrụ gọọmentị Ford na-arụ ọrụ na WhiteHorse na mpaghara ahụ ma ha bụ ndị na-akwado ọrụ na ndị ọrụ afọ ofufo na obodo nke na-enye $ 1000 onyinye nye nwa akwụkwọ edebara aha oge niile na mmemme ihe nkiri na YSOVA.
Guzobe na 1938, New Brunswick College of Craft & Design bụ naanị ụlọ ọrụ Canada na-elekwasị anya na ezigbo ọrụ na imewe
The New Brunswick College of Craft & Design (NBCCD) bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ kachasị mma na Canada na-enye ọtụtụ usoro ọmụmụ ihe site na ụlọ ọrụ nka ọdịnala na usoro dijitalụ nke oge a yana Aboriginal Visual Art Program.
NBCCD na-enye ezigbo ntọala maka omume ọkachamara, mmepe onwe onye, ​​na-azụlite ihe okike, ma tinye akwụkwọ iji mụta nka na nka na imepụta ihe na-enye ụmụ akwụkwọ ohere ịchọpụta ikike pụrụ iche ha nwere, mee ka agụụ ụmụ akwụkwọ, nrọ na ikike ha bụrụ ọrụ ma bụrụkwa akụkụ nke ndị na-eto eto obodo nke nka na imewe ọkachamara.
New Brunswick College of Craft & Design na-enye ndị nkuzi oge na ụmụ akwụkwọ oge niile chọrọ ịmụ akwụkwọ na enyemaka ego, enyemaka ndị a bụ;
Ntughari ugwo ulo akwukwo ohuru bụ ụdị enyemaka ego enyere iji nyere ụmụ akwụkwọ nwere nnukwu nsogbu ego na onye ahọpụtara ahọpụtara mgbe niile na-achọ ịmụ ihe na NBCCD nwere ike ị nweta akwụkwọ ebe ahụ.
New Brunswick Community College Foundation nyere onyinye na-akwado ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ka ego ahụ kwere. Ntọala ahụ na-enye ụmụ akwụkwọ NBCCD ego, agụmakwụkwọ, na onyinye maka isi na ngalaba ha họọrọ.
Ntọala Sheila Hugh Mackay bụ onyinye enyere nwa akwụkwọ na Advanced Studio Practice Mmemme gosipụtara ọrụ aka magburu onwe ya na nka ma ọ bụ imewe ma nwee ọmarịcha akwụkwọ agụmakwụkwọ.
Nkuzi PETL na mmepe bụ ụdị enyemaka ego enyere ụmụ akwụkwọ ahọpụtara ahọpụtara ndị mejupụtara mmemme mmemme nke Ọzụzụ na Ọzụzụ (TSD) chọrọ.
N'ịbụ ndị nwere ụlọ ọrụ ihe eji eme ọtụtụ ihe, Ottawa School of Art dị ka otu n'ime ụlọ akwụkwọ nka kacha mma na Canada na-arụ ọrụ bara uru iji zụlite nkà mmụta ụmụ akwụkwọ na nka site na nwata ruo ntozu ntozu ma dozie ha ka ha ga-esi nwee ihu ndụ na mpụga ogige ahụ.
Tawalọ Akwụkwọ Art nke Ottawa na-enye ego mmụta, nke ndị ụfọdụ na-akwado, maka ụmụ akwụkwọ ndị na-achọ ịchụso agụmakwụkwọ ha na ụlọ akwụkwọ ahụ na ndị ahọrọ ahọpụtara ga-ahọrọ ụzọ ha họọrọ.
N'ịbụ onye guzosiri ike na 1967 dị ka ụlọ akwụkwọ nkà na Canada yana usoro ụlọ akwụkwọ okike ya - nke ezubere iji nye gị nsogbu na nsogbu echiche dị egwu - yana mmemme miri emi na-enye ihe ngosi dị iche iche, Sheridan College, Ngalaba nke Animation, Arts na Design na-enye ụmụ akwụkwọ ahụmahụ dị ịtụnanya nke na-akwadebe gị maka ọrụ na ndụ.
Iji nyere ụmụ akwụkwọ aka n'ihu, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ndị na-achọ ịmụ ihe na Sheridan usoro enyemaka ego maka usoro enyemaka ndị a;
A na-enye ndị nkuzi dabere na njirisi dịka ọmarịcha agụmakwụkwọ, itinye aka na obodo, gosipụtara ikike iduzi, yana mkpa ego.
Sheridan Degree Mmụta Mmụta Mbata na-enye ndi ntinye akwukwo ndi choro ka ha buru ndi isi na akwukwo nke o bula.
A na-enye ụmụ akwụkwọ nwere ego ego siri ike mana ha chọrọ ịmụ akwụkwọ na Sheridan College, Ngalaba Animation, Arts na Design.
Ọmụmụ Awards bu ndi Sheridan gosiputara umu akwukwo ndi gosiputara ihe omuma ha, umu akwukwo ha choputara ka ha merie onyinye a.
N'ebe ahụ, ị ​​nwere nkọwa zuru ezu emelitere na ụlọ akwụkwọ kachasị elu na Canada na agụmakwụkwọ nwere ike ịkwalite ma melite ikike ị nwere, na-eme ka ị dịkwuo mma n'ihe ị na-enwekarị mmasị ịme na mpaghara nka, wee zụọ gị nka chọrọ ihu na ụlọ ọrụ okike.
Mahadum 5 dị na Canada Na-enweghị Withoutgwọ Ngwa Maka Studentsmụ Akwụkwọ Mba na Domlọ
Otu esi etinye akwụkwọ maka Mahadum dị na Kanada - Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Ulo akwukwo ulo akwukwo 15 na ekwuputaghi na Canada
Mahadum 10 kacha elu na Canada maka Science Science
Mahadum nke Alberta nke Arts | Ọkà Mmụta | Nkuzi ụgwọ | Mbanye | Ngwa
Bestlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ kacha mma 15 n'ụwa
Lee akụkọ m ndị ọzọ
Thaddaeus bụ onye na-emepụta ọdịnaya ọdịnaya na SAN nwere ahụmịhe karịrị afọ 5 n'ọhịa nke okike ọdịnaya ọkachamara. O deela ọtụtụ akụkọ na-enyere aka maka ọrụ Blockchain n'oge gara aga na ọbụna n'oge na-adịbeghị anya mana kemgbe 2020, ọ na-arụsi ọrụ ike n'ịmepụta nduzi maka ụmụ akwụkwọ chọrọ ịga akwụkwọ na mba ọzọ.
Mgbe ọ naghị ede akwụkwọ, ọ na-ekiri anime, na-eme nri dị ụtọ, ma ọ bụ na-egwu mmiri.
Ụlọ akwụkwọ egwu 8 kacha mma na Canada
Ụlọ akwụkwọ egwu 11 kacha mma na Singapore
Ihe nkuzi MBA dị n'ịntanetị nke iri na abụọ na asambodo
Otu esi enweta MBA na Norway
Ọmụmụ Akwụkwọ Canada Akwụkwọ Ọmụmụ Akwụkwọ Ọhụụ Niile Postgraduate Scholarship Nnyocha na Mmekọrịta Ndụmọdụ agụmakwụkwọ Na-amụ Nduzi ná Mba Ọzọ Jiri Ọmụmụ Ihe Na-amụ Ihe ná Mba Ọzọ N'okpuru Ọmụmụ Akwụkwọ Gụsịrị Akwụkwọ
Mahadum Alberta nke ArtsLọ akwụkwọ nka na Canadaụlọ akwụkwọ nka na canada torontoSchoolslọ Akwụkwọ Nkà Mmụta Ọzụzụ Na Canada Na Sikolasmahadum nka na TorontoNkà na Echicheụlọ akwụkwọ nkà mmụta kacha mma na ontarioOgige maka Arts & KereMahadum ConcordiaMahadum Emily Carr nke Art & DesignNgalaba nke AnimationNgalaba nke Fine ArtsỤlọ akwụkwọ George BrownNew Brunswick College nke Craft & DesignValọ akwụkwọ Art & Design nke Nova ScotiaMahadum Ontario & Art nke OntarioLọ Akwụkwọ Art nke OttawaSheridan CollegeUklọ Akwụkwọ Visual Arts nke Yukon
Previous Post:Mahadum 7 kacha njọ na Canada
Next Post:Usoro Ntanye 15 Na-enweghị Ntaneti na Asambodo
Pingback: Schoolslọ akwụkwọ nka kacha mma 10 na Canada nwere Scholar.hips na enyemaka ego.
Pingback: Ndepụta nke mahadum agụmakwụkwọ n'efu na Canada maka ụmụ akwụkwọ mba ụwa 2021
Susan Ukpong ekwu, sị:
December 14, 2020 na 10: 36 pm
Biko kedu ka m ga - esi soro onye ọ bụla mee ihe a iji nyere aka ma kwado obodo m, m dị mma na nka ma chọọ itinye aka na ọrụ obodo maka ụlọ akwụkwọ dị iche iche na Nigeria
Okpara Francis ekwu, sị:
March 17, 2021 na 4: 53 am
Schoolslọ akwụkwọ nka a edepụtara ebe a dị na Canada, ọ bụghị Nigeria.
Nancynagy ekwu, sị:
July 28, 2020 na 11: 27 pm
Nancy nagy ezi nka ngalaba na-ewe ọtụtụ ọnụ ahịa na Italy na Egypt na jordan
Nancy kwuru ekwu, sị:
July 28, 2020 na 11: 25 pm
Nkuzi mmuta na canda na imewe na nka na oru na veranda Ana m ewere otutu ego n’ intali na Jọdan na Egypt
-isi ekwu, sị:
June 30, 2020 na 1: 26 pm
Ọ ga-amasị m inweta akwụkwọ mmụta maka ọmụmụ ARTS na Canada. Kedu ka m ga-esi tinye akwụkwọ?
July 1, 2020 na 9: 56 pm
Nwere ike itinye akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ọ bụla dị n'elu ebe ha niile nwere ndokwa agụmakwụkwọ
Anthony Tamale ekwu, sị:
June 23, 2021 na 10: 10 pm
Achọrọ m ịga akwụkwọ na Canada maka ogo mmụta na ART na DESIGN.
Gwa m nke ndị na-kwuru site email.
Gwa m nke ọhụrụ posts site email.
Gbalịa ọrụ ide edemede site Writix iji nweta enyemaka ndị ọkachamara UK.
Soro ndi otu nkuzi ohuru ohuru a Ebe a
Nata ozi ohuru banyere mmemme mmụta ọ bụla na-aga n'ihu ma soro ụmụ akwụkwọ ụwa na-akparịta ụka na agụmakwụkwọ sitere n'akụkụ ụwa niile.
Soro anyi Otu International Telegram Group (Mkparịta ụka enyere)
Soro anyi International Scholarship WhatsApp Otu 2 (Mkparịta ụka anaghị akwado)
Soro anyị na Twitter iji hụ tweets ọhụrụ anyị banyere ohere na agụmakwụkwọ na mba ofesi.